Ciidan ilaaliya xeebaha oo Jabuuti loogu tababaray Galmudug & Puntland (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Askar wey ka noqoneysa ciidamada ilaalada xeebaha deegaanada Puntland iyo Galmudug oo tababar lagu soo siiyey dalka Jabuuti ayaa shalay ka degaya garoonka diyaaradaha Gaalkacyo.
Askartaan oo gaareeysay ilaa 38 askari oo ka kala socday dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug Ciidamadaan ayaa socdaalkooda waxaa ku wehliyay Taliyaha ciidanka badda ee Dowlad gobaleedka Galmudug G/sare Maxamed Yuusuf Xaashi Cilmi Qabax iyo wasiirka wasaarada kaluumeysiga Kheyraadka Badda Iyo Dakadaha C/qaadir Cali Jaamac Qalabxoor oo iyagu kasoo qeyb galay xafladii tababarka loogu soo xirayay ciidankaan ee lagu qabtay dalka Jabuuti Jimcihii aynu soo dhaafnay.
Askartaan oo ah dufcadii 3-aad ee ciidamada badda maamulada Galmudug iyo Puntland ee tababar ciidan oo ku saabsan ilaalinta xeebaha kusoo qaata dalka Jabuuti ayaa waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyay masuuliyiin iyo saraakiil ka tirsan kuwa Dowlad Gobaleedka Galmudug.
Wasiirka wasaarada kaluumeeysiga Kheyraadka Badda iyo Dakadaha Galmudug C/qaadir Cali Jaamac Qalabxoor oo soo dhaweeyn ka dib warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka weyn ee magaalada Galkacyo ayaa sheegay in ay dadaal dheer u galeen sidii loo heli lahaa in Galmudug eey yeelato ciidan u tababaran ilaalinta xeebaha.
Deegaanada Puntland iyo Galmudug ayaa ahaa meelaha ugu badan ee ay ka jiri jireen burcad badeedda Soomaalida.